बुटवलमा २४ घण्टामा १ सय शैय्याको अस्पताल
७ चैत, बुटवल । कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि बुटवलमा १ सय शैय्याको कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पताल निर्माण शुरु भएको छ । अस्पताल शनिबारसम्म सञ्चालन हुने गरी निर्माण थालिएको हो । बुटवल धागो कारखानाको फिनिसिङ ब्लकमा …
पछिल्लो २४ घण्टामा १९ सय ९३ जना कोरोनामुक्त
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १९ सय ९३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशभरबाट १९ सय ९३ जना संक्रमणबाट निको भइ घर फर्केको जानकारी दिएका छन् । यो सँगै निको हुनेको संख्या २ लाख ८९ हजार ७ सय ८३ पुगेको छ ।
Prashasan 1 दिन पहिले
कर्णाली कोभिड अस्पताल: २४ घण्टामा छ जना संक्रमितको मृत्यु
‘पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना अस्पतालमा उपचार भइरहेका र आएका छ जनाको मृत्यु भएको छ,’ कोरोना फोकलपर्सन डा. पौडेलले भने, ‘अस्पतालमा विरामीको चाप अत्याधिक हुँदा उपचारका लागि समस्या भइरहेको छ।’...
नागरिक दैनिक6दिन पहिले
२४ घण्टामा चार हजार आठ सय ९७ जनामा काेराेना पुष्टि
काठमाण्डाै – नेपालमा कोरोना भाइरसकाे सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३० हजार नाघेको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार आठ सय ९७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या ३० हजार नौ सय दुई पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार आठ सय ७९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा चार हजार सात सय ७४ र नौ सय ५५ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । आज सङ्क्रमण पुष्टि भएकामध्ये दुई हजार ४७ जना काठमाण्...
उज्यालो अनलाइन 8 दिन पहिले
भयावह बन्दै कोरोना, २४ घण्टामा ४५ सय बढीमा संक्रमण पुष्टि
बितेको २४ घण्टामा नेपालमा ४५ सय बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको २४ घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ४५ सय २४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट १४ हजार ६७२ जनाको परीक्षण गर्दा ४ हजार ३४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट १ हजार ९ जनाको परीक्षण गर्दा १६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै बितेको २४ घण्टामा थप १८ जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको पनि मन्त्
Ratopati9दिन पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ३२ जना कोभिड १९ सङ्क्रमण पुष्टी, मृत्यु सङ्ख्या भने शून्य
पहिलो पोस्ट 28 दिन पहिले
२४ घण्टामा २ सय ९८ जनामा कोभिड १९ सङ्क्रमण, दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौँः पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ९८ जनामा कोभिड १९ सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार २ सय ९८ जनामा कोभिड पोजेटिभ देखिएको हो। सोही अवधिमा ७४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। २४ घण्टाको अवधिमा देशभर २ जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो अवधिमा…
पहिलो पोस्ट 29 दिन पहिले
कोभिड संक्रमितको सङ्ख्या ह्वातै बढ्यो, २४ घण्टामा २ सय ६६ जना थपिए
काठमाडौंः पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ६६ जनामा कोभिड १९ सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार २ सय ६६ जनामा कोभिड पोजेटिभ देखिएको छ। हिजो तुलनामा यो झन्डै १ सय जनाले बढी हो। १ सय २ जना भने कोभिड सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। २४ घण्टाको अवधिमा…
२४ घण्टामा देशभर १ सय ५२ जना कोभिड १९ सङ्क्रमित थपिए
काठमाडौंः पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ सय ५२ जनामा कोभिड १९ सङ्क्रमण पुष्टी भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित बुलेटिन जारी गर्दै १ सय ५२ जनामा कोभिड पोजेटिभ भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै कोभिडको कारण एक जनाको मृत्यु भएको छ। २४ घण्टामा ६५ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर २…
पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६२ हजार ६ सय जनामा कोरोना संक्रमण
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय दैनिक रुपमा बढ्दै छ। पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६२ हजार ६ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय २० जना कोरोना संक्रमित
गत २४ घण्टामा २ हजार ८ सय ९१ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा १ सय २० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या २२ लाख ५१ हजार ८ सय ८४ पुगेको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८८ जनामा कोरोना संक्रमण
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ सय ८८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार २ सय ४४ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको मध्य भागमा पर्ने बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीले यात्रुहरू निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । साढे दुई घण्टामा पार गर्न सकिने यो खण्डमा अहिले गाडीलाई ८ घण्टासम्म लाग्दा यात्रुले सास्तीमाथि सास्ती खेप्नुपरिरहेको हो । देशकै सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गको ११५ किलोमिटर सडकखण्ड पछिल्लो सात/आठ महिनायता धुलाम्मे र हिलाम्य छ, जसका कारण सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन मात्र नभई आकस्मिक सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको छ । अझै बर्दघाट, दाउन्ने दुम्किबाससम्मको १५ किलोमिटर सडक पार ग...